War hadda soo dhacay ayaa sheegaya in rasaas laga maqlay magaalada Muqdisho, iyadoo la maqlayo dhawaqa rasaasta meel u dhow xarunta Madaxtooyada Soomaaliya.
Ra’iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa maanta gudddoomay abaal-marinta caalamiga ee nabadda ee Nobel, isagoo khudbad ka jeediyey munaasabad ka dhcay magaalada Oslo ee dalka Norway.
Baarlamaanka Puntland oo xasaanadii xildhibaannimo ka qaaday Guddoomiyihii hore C/xakiin Dhoobo-Daareed
Golaha Wakiillada Puntland ayaa goor dhoweyd xasaanadii xildhibaannimo ka qaaday guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka Puntland Cabdixakiim Maxamed Axmed (Dhoobo Daareed).
Midowga Yurub ayaa maanta magaalada Muqdisho ku sameeyay bandhig sawirro oo lagu xusayo Marxuumad Alamaas Elman Cali oo 20-kii bishan lagu dilay magaalada Muqdisho.
Maxkamadda Darajada 1aad ee Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukun dil toogasho ah ku riday askari ka tirsanaa Ciidamada Dowladda oo isu bedelay, kaasoo baxsad ka ahaa ciidamda, kana qaraaban jiray Gobolka Sh/Hoose.
Wararka laga helayo Gobolka Mudug ayaa sheegaya in dagaal u dhaxeeya maleeshiyo beeleed kasoo kala jeeda Puntland iyo Galmudug uu dib uga bilowday degaanada Bariga gobolka Mudug.
Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa muuqaal uu soo duubay ku ku dhawaaqay inuu Alle uga towbad keenay khaladkii ku jiray khudbadii uu ka jeediyey dalka Jarmalka ee dooda badan ka dhalatay.
Al Shabaab ayaa sheegatay inay howlgal ka fulisay Magaalada Muqdisho lagu dilay sarkaal sare oo ka ka tirsan ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya.
Wasiirka Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya C/llaahi Goodax Barre ayaa daah furay dhismaha Guddiga Guddiga Qaran ee Waxbarashada, Dhaqanka iyo Seyniska.
Wasiirka Duulida Hawada xukuumadda Soomaaliya Maxamed C/llaahi Oomaar oo hortegay xildhibaannada Baarlamaanka Federaalka ayaa wajahay su’aalihii ugu adkaa ee kuy saabsan xayiraadii diyaaradaha ee magaalada Kismaayo iyo Xayiraadii Madaxweynihii hore ee Shariif Sheekh Axmed.
Waxaa furmay kulankii gaarka ee xildhibaannada Baarlamaanak Federaalka, kaasoo su’aalo lagu weydiinayo Wasiiradda Amniga Gudaha iyo Duulista Hawada ee xukuumadda Soomaaliya oo mooshinno u yeeris ah laga keenay.
Qoys ka koobnaa Afar qof oo ku dhintay Guri ku dumay Magaalada Hargeysa, kadib Roob xoog leh oo…
Wararka laga helayo magaalada Hargeysa ayaa sheegaya Afar qof oo isku qoys ahaa ay ku dhinteen Guri ku dumay kadib Roob xoog leh ka da’ay caasimadda Somaliland.
Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo War kasoo saaray Cudurdaarkii uu bixiyey Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur [Daawo]
Guddoomiyaha Hay’adda Culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayaa War uu soo saaray ku sheegay in siyaasiga C/raxmaan C/shakuur laga aqbali karo cudurdaarkii uu bixiyey labadii muuqaal uu ugu danbeeyay ee uu soo duubay, balsw wuxuu caddeeyay inaan khalad laga famhin ee uu isagu duray xadiiska Rasuulka NNHK.
Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka Federaalka xildhibaan Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa sheegay in haddii doorasho dhici weyso mudadda xilkiisa uu sii jirayo Baarlamaanka.
123...1,109Page 2 of 1,109